Nigeria oo ka digtay tallaalada been abuurka ah ee COVID | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Nigeria oo ka digtay tallaalada been abuurka ah ee COVID
Masuuliyiinta Nigeria ayaa dhawaan shaaciyay inay rajeynayaan inay talaalaan boqolkiiba 40
Masuuliyiinta Nigeria ayaa ka digay talaalada been abuurka ah ee loo yaqaan ‘coronavirus talaalka ee wadanka halkaasoo 10 milyan oo daawo dhab ah oo talaalada ah la filayo inay yimaadaan bisha Maarso.
“Waxaa jira warbixino sheegaya tallaalo been abuur ah oo ka socda Nigeria,” Agaasimaha Guud ee Hay’adda Qaranka ee Nigeria ee Xakamaynta Daroogada iyo Maareynta Cuntada (NAFDAC) Mojisola Adeyeye ayaa sheegtay Jimcihii.
Dhibaatada COVID-19 ayaa xakamaysa dalabka saliida: Nigeria ayaa ku taageeraysa dhimis dheeri ahNigeria waxay u rogmatay hoos u dhac dhaqaale oo lagu eedeeyay COVID-19 iyo sicirka saliidaNigeria COVID-19 badbaade: ‘Khibrad aanan cidna ka rabin
“NAFDAC waxay ka codsaneysaa shacabka inay iska ilaaliyaan. Majiro talaal COVID oo ay ansaxisay NAFDAC. Talaalada been abuurka ah waxay sababi karaan cuduro u eg COVID ama cuduro kale oo halis ah oo dili kara. ”
Tallaallada la filayo ee Nigeria waxay ku dartaa 100,000 oo qiyaasood oo laga filayo tallaalka Pfizer-BioNTech in kasta oo aan la cayimin nooca tallaalka ah ee loo isticmaali doono 10 milyan oo tallaal.
Waxa kale oo aan caddayn in dufcadan ay maalgelin doonaan Midowga Afrika (AU) ama qayb ka mid ah COVAX, oo isku xidha Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo la-hawlgalayaasha gaarka loo leeyahay si ay uga shaqeeyaan soo iibsiga iyo isu-qaybinta sinnaanta.
Masuuliyiinta Nigeria ayaa dhawaan shaaciyay inay rajeynayaan inay talaalaan 40 boqolkiiba dadka ku nool sanadka 2021.
Laakiin caqabadaha gaadiidka iyo keydinta tallaalada malaayiin dad ah ayaa aad ugu weyn wadan ay ka maqanyihiin isbitaalo ku filan.
Bishii Abriil ee sanadkii hore, baaritaanada suuqa madow ee loo yaqaan ‘coronavirus virus’ ayaa ku soo batay Nigeria sababta oo ah muwaadiniinta ayaa diidan in lagu soo rogo karantiil qasab ah.
Dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, oo ay ku nool yihiin 200 milyan oo qof, Nigeria ayaa si rasmi ah u soo wargelisay ilaa 104,000 oo xaaladood oo COVID-19 ah, oo ay u dhinteen 1,382.
Laakiin tirooyinkan ayaa la rumeysan yahay inay ka gaabi doonaan qasaaraha dhabta ah tan iyo inta tijaabooyinka ay hooseeyaan.
Kiisaska ayaa si aad ah kor ugu kacay illaa dhammaadkii Nofeembar, gaar ahaan caasimadda dhaqaalaha ee Lagos, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 20 milyan oo qof. Heerka dhimashada sidoo kale wuu kordhay.
Nooc kaladuwan oo coronavirus ayaa la helay bilihii la soo dhaafay. Waxaa laga helay laba shaybaar bukaan ah oo la soo ururiyay 3-dii Ogosto iyo 9-kii Oktoobar ee gobolka Osun ee Nigeria, sida lagu sheegay warqad cilmi-baaris oo shaqeysa oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Associated Press.
Previous articleNigeria warns against fake COVID vaccines
Next articleShabaab holding three who went missing after Mandera attack, say police Nation Africa
Qaramada Midoobayoo warqad ka dhan ah Soomaaliya iyo dalalka Comoros...